लाइसेन्सका लागि तीन सातामा चार लाखको आवेदन – Nepal Japan
लाइसेन्सका लागि तीन सातामा चार लाखको आवेदन
नेपाल जापान २९ कार्तिक १९:०१
लामो समयसम्म अवरुद्ध रहेको चालक अनुमतिपत्र भर्नेको सङ्ख्या तीन सातामा नै झण्डै चार लाख पुगेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कात्तिक ८ गतेदेखि आवेदन पुनःखुलाएको थियो ।
दुई वर्षयता नियमितरुपमा सेवा चालू नभएकाले पनि थोरै समयमा धेरैको आवेदन परेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । कात्तिकभन्दा पहिलेसम्म झण्डै दुई लाख आवेदन दिएकाको परीक्षा लिन बाँकी रहेकामा अहिले त्यो सङ्ख्या झण्डै छ लाखको हाराहारीमा पुगेको विभागका प्रवक्ता डा लोकनाथ भुसालले बताउनुभयो ।
कोभिड सङ्क्रमणका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयलले परीक्षा लिने अवस्था नहुँदा आवेदन स्थगित गरिएको थियो । विभागले आवेदन लिइरहँदा यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि नियमितरुपमा परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । दैनिकरुपमा नयाँँ आवेदन दिने बढिरहेको विभागका प्रवक्ता डा भुसालले बताउनुभयो ।
कात्तिकको दोस्रो सातादेखि नै आवेदन पुनःखुलाइएको भए पनि बीचमा झण्डै चार दिन अवरुद्ध भएको थियो । एकैपटक धेरै सेवाग्राहीले आवेदन भर्न खोज्दा समस्या आएको प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो ।
गत वर्ष पनि विभागले अनलाइन फाराम खुलाउनासाथ भर्न नसकिने समस्या देखिएको थियो । सेवाग्राहीको चापका आधारमा पनि सफ्टवेयरको क्षमता बढाइएकाले अहिले समस्या नआएको विभागले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अपडेट गरेपछि फारम बुझाउन सकिएन भन्ने गुनासो छैन ।”
विसं २०७६ चैतमा कोभिडका कारण सरकारले बन्दाबन्दी लागू गरेसँगै नयाँ चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा रोकिएको थियो । गत वर्ष माघमा सङ्क्रमण कम भएको भन्दै अनलाइन फाराम खुलाइएको भए पनि सङ्क्रमण पुनःबढेपछि स्थगित भएको थियो । दुई वर्षयता नियमितरुपमा परीक्षा हुन नसकेकाले धेरै सेवाग्राही परीक्षामा सहभागी हुन पाइरहेका छैनन् ।
वायु प्रदूषणले अल्जाइमर रोग लाग्न सक्ने : अध्ययन
बलात्कार मामिलामा हदम्याद हटाउन क्रान्तिकारीको माग
थप १० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
जनकपुरमा मनोजको दावी मतदाताबाट अनुमोदन
१० जेष्ठ ००:१५
९ जेष्ठ २३:५१
९ जेष्ठ २२:३९
९ जेष्ठ २२:३०
जनप्रतिनिधिले जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ : वरिष्ठ नेता पौडेल
९ जेष्ठ २२:१९
१. स्थापित र सिर्जनाको ‘कोर क्षेत्र’मा पनि रोकिएनन् बालेन
२. ६ सय २८ पालिकाको मतपरिणाम आउँदा दलहरुको हैसियत यस्तो छ
३. काठमाडौंमा ६२ हजार मत गन्न बाँकी, बालेनको अग्रता १७ हजार बढी
४. बाग्मती सफाई महाअभियानको नौ वर्ष
५. मधेशमा २२ वर्षीय राजाबाबु यादवले रचेको इतिहास
६. सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकबाट बलात्कृत युवतीको घरमा पुग्यो प्रहरी
७. कामपा १४ वटा वडाको नतिजा सार्वजनिक, बालेनको कट्यो ४० हजार मत